Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2017 → janvier → 20 → RN2 : Vao avy nivoaka ny fonja ny iray amin’ireo mpanakan-dàlana
Efa mananiky ny fiara 50 no voasakan-dalana sy voatora-baton’ireo andian-jiolahy tamin’ny lalam-pirenena faha-2 ankehitriny. Omaly izao dia efa nisy fiara roa tratran’ireo andian-jiolahy ireto indray, saingy tsy nisy nijanona izy ireo na betsaka aza ny fahasimbana sy nisy ireo mpandeha.
Manao ny ezaka mafy amin’ny famongorana ireto andian-jiolahy ireto ny zandarimariam-pirenena, koa nisy ny vokatra azon’izy ireo teo anelanelan’ny Sahavalaina, Brickaville, Ambodipolomosy, Marofody ary Tanambe, no tena fanaovan’izy ireo ny fanakanan-dalana sy fitoraham-bato ireo fiara mampiasa ny lalam-pirenena faha-2. Taorian’ireo jiolahy roa tratra am-bodiomby izay efa miandry fitsarana am-ponja eto Toamasina, dia nisy indray ny vokatra manaraka izay tratra am-bodiomby ihany koa ireto jiolahy fito mirahalahy teo am-panakanana fiara mpitatitra . Raha ny fanazavan’ny kaompanian’ny zandarimariam-pirenena Toamasina, Komanda Randrianantenaina Leon, tamin’ny kara-panondron’izy fito lahy dia avy any Ambovombe avokoa izy rehetra. Tamin’izy fito mirahalahy tratra ambodiomby ireto dia vao nahazo fahafahana ny 11 janoary nandritra ny fanalafehan-tsazy nataon’ny filoham-pirenena farany teo ny iray antsoina hoe Faliantsoa Jean Baptiste. Mbola nisy iray antsoina hoe Solondrazana koa nahatrarana basy PA iray nandritra izany, izy izay efa in-3 nifonja ary vao nahavita ny saziny ihany koa ny taona 2015 izao namerin-keloka izao.
Ny fanazavan’ny kaompanian’ny zandary Toamasina ihany koa no nahalalana fa amin’ireo 9 efa voasambotra amin’izao fanakanan-dalana sy fitoraham-bato fiara mihazo ny lalam-pirenena faha-2 izao, dia efa mpamerin-keloka avokoa ny enina amin’izy ireo raha ekipa vaovao vao nafarana kosa ny telo. Ho an’ny zandary dia misy ambaika izao raharaha izao fa tsy tongatonga ho azy, ka eo am-panadihadiana izany izy ireo izao, satria misy mividy sy maka ary manafina ireo entana sy fitaovana ary ny vola azon’izy ireo mandritra izao fanakanan-dalana mpitatitra amin’ny lalam-pirenena faha-2 izao.